Emirates ayaa sheegtay in faa’iidada xilli sanadeedkeeda March 2018 illaa March 2019 ay ahayd 237 milyan oo dollar, taasi oo aad uga yar marka loo bar-bar dhigo sanadkii kaas ka horeeyey oo ay faa’iiday $765 milyan oo dollar.
“2018-2019 waxa uu ahaa sanad adag, waxqabadkeena ma uusan ahayn sidii aan jecleyn” waxaa sidaas yiri guddoomiyaha iyo madaxa fulinta Emirates Group, Sheikh Ahmed bin Saeed Al-Maktoum, oo bayaan soo saaray.
“Qiimaha shidaalka oo sare u kacay iyo sarifka dollar-ka ee lacagaha kale oo xoogaystay ayaa hoos u dhigtay faa’iidadeenna” ayuu yiri.
Emirates ayaa sheegtay in lacagtii ay ugu talo-gashay shidaalka ee sanadkii tagay ay sare u kacday 25%, oo ay gaartay 8.4 bilyan oo dollar.
Shirkadda Emirates Airlines ayaa sanadkii tagay qaaday 58.6 milyan oo rakaab, taasi oo ku dhowaad la mid ah sanadkii kaas ka horeeyey.